News – Page 955 – Puntland Voice
Muqdisho oo Maalintii sedexaad ay dagaalo ka holcayaan.
Muqdisho (AB):-Dagaaladii u dhexeeyay Xoogaga Islaamiyiinta iyo Dowlada KMG oo garab ka heleysa Amisom ayaa maalintii sedexaad oo xiriir ah cawo iyo maalin waxaa uu ka socdaa magaalada Muqdisho. Dagaalada waxay ka socdaan magaalada inteeda badan marka la eegoo […]
Madaxweyne Shariif oo ka hadlay dilalkii Maanta Xarakada Alshabaab ugaysteen Tiro Xildhibaanada ka mid ah
Madaxweynaha Dowlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa ka hadlay saacado ka dib markii maanta barqadii Muqdisho lagu laayay tiro ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed. Madaxweynaha waxaa uu sheegay ugu horeyn canbaareyn u jeediyay falka lagu qaarajiyay xildhibaanada iyo saraakiil Dowlada […]
Khasaaraha dagaalka Maanta iyo dhinacyada oo ka hadlay
Muqdisho (AB):-Dagaalka Maalintii 2aad ka socda Muqdisho ayaa warar isa soo tarata ka soo baxay khasaaraha uu gaystay dagaalka saaka dib u qarxay ilaa duhuradaana wali sii socda. in ka badan 10 ruux ayaa la sheegay inay geeriyoodeen markii badankood […]
Mid ka mid ah Agaasimayaasha Idaacadaha Muqdisho oo Maanta ku geeriyooday dagaalada Muqdisho ka dhacaya
Muqdisho (AB):_Alle ha u naxariistee waxaa maanta Muqdisho ku geeriyooday Agaasimihii Idaacada Xurmo ee Magaalada Muqdisho isagoo marayay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. Marxuumka oo lagu magacaabi jirey Barqad Cawaale Aadan ayaa la sheegay inay haleeshay xabad wiifto […]
Dowlada KMG iyo Xarakada Alshabaab oo siyaabo kala duwan uga hadlay Xildhibaano badan oo Maanta lagu dilay Muqdisho
Muqdisho (AB):-Labo Mas’uul oo u kala hadashay Dowlada KMG Soomaaliya iyo Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa siyaabo aad u kala duwan waxay uga hadleen xildhibaano Soomaaliyeed oo Maanta lagu dilay magaalada Muqdisho. Afhayeenka Xarakada Alshabaab oo sheegay inay iyagu ka danbeeyeen ayaa […]
Xildhibaano Dowlada ka tirsan oo loogu galay Hotel Muna ee Muqdisho laguna laayay
Muqdisho (AB):-waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ay saaka gudaha u galeen Hotel Muna oo ku yaal nawaaxiga madaxtooyada Vila Somalia ee Magaalada Muqdisho halkaasoo ay daganaayeen xildhibaano ka tirsan Dowlada KMG Soomaaliya. Sida […]
« Previous 1 … 953 954 955 956 957 … 1,022 Next »